इन्डोनेसियामा भूकम्प, ३४ को मृत्यु! – NepalajaMedia
इन्डोनेसियामा भूकम्प, ३४ को मृत्यु!
January 15, 2021 158
इन्डोनेरियाको सुलावेसी द्वीपमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा ३४ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । यस भूकम्पमा परेर एक अस्पताल र कयौँ भवन भत्किनुको साथै र क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ ।
बिहान सबेरै आएको यस भूकम्पमा परी सुलावेसी द्वीपका सयौँ व्यक्ति घाइते भएका जनाइएको छ । यस द्वीपमा साढे दुई वर्षअघि आएको भूकम्प र सुनामीमा परी हजारौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
सुलावेसी द्वीपको मामुजु शरहमा मात्र यस भूकम्पको कारण २६ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रकोप नियन्त्रण विभागका प्रमुख अलि रहमान बताउनुभएको छ । भवनको भग्नावशेषमा अझै पनि व्यक्तिहरु पुरिएको अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी मामुजु शहरबाट निकै टाढा रहेको दक्षिणी क्षेत्रमा भूकम्पको कारण आठ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । दुबैतर्फ गरी ३४ जनाको मृत्यु भएको प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
Prevनेपाल–भारत बैठक : दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि छलफल सकारात्मक !
Nextमाघ ३ गते शनिबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बाके बाट १७ दिनदेखी हरा-एका हेमराज जङ्गलमा भेटिए | कि-रा परेको र स-डेको अवस्था थियो हेमराजको स-रीर (हेर्नुहोस भिडियो)
फाल्गुन ८ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल!
बिहे गरेकै साँझ अस्पताल भर्ना, बिहेको ७२ घण्टाभित्रै बेहुलाको निधन, शोकमा डुब्यो गाउँ